कम्मरको कोठी.....! | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
चुच्चो परेको ढुंगाको चुचुरोमा टुसुक्क बसेकी जुनेलीको आडमा 'येमान्का' साँप्रा भएकी अर्की युवती बसेकी थिई । पुठापट्टि कहाली लाग्दो भिर छ । तल छ्वांङ्ग परेको कयरो होलाजस्तो ठाममा ढुंगाको चुचुरोमा बसेर आफ्नै कन्नापरी फर्केकी जुनेलीको अनुहार भने देखिएको छैन । किन अन्मरिएकी होली ? त्यस्तो डर लाग्दो ठाममा ..!
हाईकिंगको नाममा कति असजिलो ठाममा चढेकी ! मलाइ लड़छे कि झैं लाग्यो अनि – जुनेली “भुङ्ग होलिस” है भनेर मैले टुच्च जिस्क्याएं । के हो मुर्दार भुङ्ग भनेको.. भनेर जुनेली खितिति हांसी ! साना बच्चाहरु हिड्न नजानेर लड्नुलाइ “भुङ्ग हुनु” भन्छन .. मैले जवाफ फर्काएँ .. अनि म सानी हुँ त बाउँन ... जुनेली फेरि खित्खिताई ...!
धेरै दिन भएको थियो जुनेलीसंग दोहोरो संबाद नभएको । उ एसो कमेन्ट बक्समा झुल्कंछे मात्र । हुन त दिनभरिमा सामाजिक संजालमा बाक्लै उपस्थिति हुन्छ उसको तर पनि मसंग जम्काभेटको लागि भने साईत् नै पर्खनु पर्छ उस्लाई ।
साना चोटले उ मेरोमा कमेन्ट गर्न आउदिन र म पनि गई राख्दिन, साह्रै पातलियो त जुनेली हाम्रो बोलीचाली त किन हो ? मैले उसको ज्यानलाईइशारा गर्दै बैशालु छेड हानें । हाईकिंगले ज्यान पातलो बनाउने भनेको बोलचाल पनि पातलियो ! बरु अरु के के पातलो हुँदोरैछ हईकिंगले ? मैले अर्को लट सेक्सिलो लाईन मारें ..!
अचेल जुनेली बोल्दिन ! म पनि बोलाउदिन ..! कहिले काही प्रतिपदाको जुन झैं झुल्कीन्छे मेरो म्यासेज बक्समा उ । 'ओई यता सुन न ...'! उसले सुरुमा पठाउने म्यासेज यत्ती हुन्छ ! 'भन न...!' भनेर रिप्लाउछु म । उस्ले भन्न खोजेको कुरा आजै भन्छे या अर्को हप्ता फेरी त्यै कुरा लिएर आउछे भन्नेकुरा मैले पत्तो पाउदिन । यत्ती कुरा भनेर पन्ध्र दिन अलप भैदिन सक्ने केटी हो उ ।
अचेल उसको र मेरो सम्बन्ध धेरै नै अनौपचारीक छ । हजुर तपाई जस्ता संबोधनबाट सुरु भएको हाम्रो मित्रतालाई एकदिन अचानक 'तिमी' मा झारेकी जुनेली अर्को दिन फित्रीक्क 'तँ साले' मा झरी । साह्रै हेपी यार मोटीले ! म भित्रभित्रै मुर्मुरीएँ । सम्मान गर्दागर्दै मलाई तँ भन्ने ? कसरी सकेकी यार ! मुखभरीको जवाफ दिउँ झैं लाग्यो । रिप्लाई लेख्दै थिएँ मेरो कल्पनामा एउटा तरंग उठ्यो । उसले साले तँ भन्दा उसको अनुहारमा रिस थियो कि खुशी ? क्रोध थियो कि मुस्कान ? मैले के भन्दा उसले 'तँ साले' भनी ?
सोच्दा सोच्दै उसको 'तँ साले' सम्बोधन निकै प्यारो लाग्न थाल्यो मलाई । त्यसदिन उसलाई जिस्क्याउन सायद कुनै हल्का ननभेज जोकको स्क्रीन सर्ट पठाएको थिएँ मैले । उसले पचाई । म त खुशी पो हुनुपर्ने ..."तँ मोटी..!" यत्ती लेखेर म पनि खुसुक्क तँ मा झरें ।
आज विहान फेसबुकमा लगईन हुदा जुनेलीको म्यासेज पिलपिलाई रहेको थियो । खोलेर हेरें उही "ओई हेर न" मात्रै रहेछ ! मैले "के हेरुँ ? खोई देखा न त हेर्छु..!" रिप्लाएर फेसबुक बन्द गरें विहान पाँच बजे । आठ बजे तिर अफीसको बाटो नाप्दै गर्दा म्यासेज टुंग बज्यो "जुनेली सेन्ट यु अ फोटो" को नोटिफीकेशन देखें । के पठाई हउ मोटीले ! मैले हतार हतार म्यासेज खोलें । उसको आफ्नै फोटो थियो । कालो ब्लाउज र कालै साडीमा साडीको सप्को टाउकोतिर लगेर भित्तामा आडेस लगाएकी जुनेली कति कामुक देखीएकी थिई म शब्दमा बयान गर्न सक्तिन । अथाह प्यास भरिएका उसका आँखा पानी भेटे समुद्र नै रित्याउला झै गरेर गहिरीएका थिए । पुरै जिउ ढाकीएको तस्बिरमा कोही यती कामुक कसरी देखीन सक्छ कोही ?
मेरो कम्मरको कोठी देखीस ? उसले पठाएको अर्को म्यासेज मेरो एकाग्रतामा घन झैं बज्रीयो ! साँच्चै लोभ लाग्दो छ उसको कम्मरको कोठी । खै कम्मरमा पनि मेकअप गरेर कोठीलाई चम्काउछे कि क्या हो उसले । जतापट्टीबाट हेर्दा पनि उसको कोठी नै पहिला देखीन्छ। आकर्षक ठाउमा रहेको उसको कोठी जिन्स पाईन्ट लगाउदा समेत देखीन्छ । भगवानले गजपको ठाउमा कोठी दिएका छन तलाई जुनेली ! तैंले लुकाउन चाहेर पनि नलुक्ने !! म कोठीको तारीफ गर्दिन्छु ! ईस होला त ...! जुनेली मख्ख पर्छे ।
यत्ती मै उसको अर्को म्यासेज आयो । ओई सुन न ..! उसको "ओई हेर न" बल्ल हेर्दै थिएँ म । अव "ओई सुन न" आयो ! यो फोटो अश्लिल छ र ? हठात उसले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनलाई पनि मैले त्यो ज्यानमारा फोटो फेरि नियाल्नु पर्ने भो ।
कसले भन्यो यो फोटोलाई अश्लिल ? मैले अश्लिल नभएको प्रतिकृया दिएँ ! तर कामुक चैं छ है जुनेली ! मैले मेरो कुरा राखें । जुनेली अश्लिलता र कामुकता विचको अन्तर भन भनेर मलाई धम्क्याउन थाली । सबै किसीमका कामुकताहरु अश्लिल हुदैनन र सबै अश्लिलता रुमा कामुकता भेटीदैन जुनेली । यो तेरो फोटो कामुक छ तर अश्लिल छैन । मेरो जवाफमा जुनेली संतुष्ट हुन सकीन । हैन यो फोटो कसरी कामुक छ भनेर प्रश्नका चाङ्ग लगाउन थाली ।
शरीरको बखान र शुन्दरताको तारीफ कत्ती मन नपराउने जुनेली आज यौटा फोटाको बारेमा किन किचकीच गरिरहेकी छ ? पक्कै केही रहस्य हुनुपर्छ । मैले कुरो खोतल्ने विचार गरें । त्यत्तीकैमा फेरी उसको अर्को म्यासेज आयो । ल भन त तैंले त्यस्तो के देखीस र मेरो फोटोलाई कामुक भनिस ..!
अव मेरो पारो तातीसकेको थियो । तिम्रा स्तनको अग्रभागले ब्लाउज छेडुला झैं गरेका छन जुनेली ! त्यहाँ आँखा पर्ने जुनसुकै पुरुषले तिम्रो फोटोमा अश्लिलता देख्न सक्छ । साडीको सप्को र ब्लाउजको फेर विचमा देखीएको तिम्रो कम्मरको छालाको आकर्षण पनि धेरै पुरुषले धान्न सक्दैनन त्यसैले त्यो फोटोलाई अश्लिल देख्न सक्छन । अथाह प्यासको कारण खडेरीको कुवा रित्तिए झैँ गहिरिएको तिम्रो नाभी जो सुकै पुरुषलाई खुत्रुक्कै पार्न सक्ने स्वरूप धारण गरेर बिचोबिच बसेको छ त्यो नाभीलाइ अश्लिल देख्ने बग्रेल्ती पुरुष आँखा भेटिन्छन समाजमा तर मैले कामुक देखें । मैले एकै सासमा मेरो जवाफ लेखेर पठाईदिएँ ।
भित्रको लुगा खुम्चीएर सानों डल्लो परेको हो मुर्दार ! तेरा फुटेका आँखा !! उस्ले 'लोल' को ईमो जोडेर पठाई.. । त्यो तैंले बुझेको कुरा हो । अव यौटा पुरुषको नजरले हेर जुनेली ! पुष्ट वक्षस्थल ढाकेको ब्लाउज बाहीर लगभग केन्द्र पारेर अर्को बिबिरो उठेको हुन्छ भने त्यो लुगा खुम्चिएरै बनेको भएपनि अंगै सरहको मान्यता पाउछ पुरुष नजरबाट हेर्दा । तँ मर्निङ् वाकमा निस्कदा अग्रभागमा खुम्चिएको ट्राउजको मुजा हेरेर अनेक थरी अनुमान लगाउने नजर बग्रेल्ती भेटीन्छन बाटोमा जुनेली । यो फोटोमा स्तनको मुन्टो अनुमान गर्नु या गरीनु ठुलो कुरो भएन । पुरुष नजर दोषी हो जुनेली तेरो फोटो ठिक छ ।
तँ स्लिम भ'की होस ? कम्मर हेरेर त त्यस्तै लाउच मलाई ..! मैले जिस्क्याएँ । अँ यार अचेल डाईटिङ्ग गर्ने र हाईकिङ्ग जाने गरिराछु । हेल्थ कन्सियस हुन परो नी यार ..! उसको रिप्लाई आयो । ए ए डाईटिङ्ग र हाईकिङ्गले पो तलाई झन भन्दा झन च्वाँक बनाईरारैछन त केटी ... मैले बैंशालु छेड हानें ..!!
तँ बोका ...!
हो यत्ती रिप्लाएर जुनेली फेरि अलप भई !